Xirnaanshaha Dhammaan Dugsiyada Inta Ka hartay Sanad Dugsiyeedka 2019-21 | Boston School Finder
Liiska Dib u Furida Dugsiga
Xiritaanka Dhamaan dugsiyada inta ka hartay sanad dugsiyeedka 2019-21
Inkastoo go'aanka Gudoomiyaha Gobalka Baker ee ah inay sii xirnaadaan dhammaan dugsiyada dawlada iyo kuwa gaarka loo leeyahay inta ka hartay sanad dugsiyeedka uu yahay mid dhib ku ah qoysaska iyo carruurtoodaba inay maqlaan, ma jiraan wax ka muhiimsan in dhammaan dadka deegaanka Commonwealth ay helaan badqab iyo caafimaad.
Waqtigaani waa waqtigii hogaaminta hal abuurka leh, xeelado isbadel ku dhisan, iyo wada sheekaysi dhab ah uu dhex mari lahaa qoysaska iyo macalimiinta. Hadda ayaa ah waqtigii ugu habboonaa abid, kani waa waqtigii aan talaabo qaadi lahayn. Hadda kama fakari karno muddo dhaw; waa inaan hadda balaarinaa diiradeena aana dajinaa xeelado ku aadan waxa noqon kara nolosheena cusub si aan u yarayno waxbarasho la'aanta inta lagu jiro muddada waxbarashada oonleenka ah.
Macalimiintu waxay u baahan yihiin ilo dhaqaale si ay ula xariiraan ulana shaqeeyaan ardaydooda. Ilo dheeraad ah waa in la siiyaa ardayda u baahan waxbarashada gaarka ah, IEP da, iyo taageerooyinka caafimaadka dhimirka. Laymanka isgaarsiinta ee u dhaxeeya qoysaska iyo saraakiisha waxbarashada waa inay furnaadaan si loo xaqiijiyo in qaylo dhaanta iyo fikradaha dhammaan dhinacyada la maqlo anagoo ka wada shaqaynayna ka gudbida masiibadaan ayadoon samaayn wayn ku reebin khibrada aqooneed ee ardayda sida ugu macquulsan.
COVID-19 maaha hub; ma uusan simin garoonka ciyaarta. COVID-19 ayaa banaanka soo dhigay xaqiiqada iyo qotoda sinaan la'aanta qoysaska la takooray ay waajaheen biloowga horaba waxay keentay in diirada la saaro arintaas. Waxaan rajaynaynaa in dadaaladu sii socon doonaan si loo qaybsho ilaha waxbarashada iyo kuwa farsamada si siman si loo xaqiijiyo in khibrada waxbarashada oonleenka ah ay noqoto mid waxtar leh sida macquulka ah dhammaan ardayda — ayadoon laga eegayn isirkooda, gurigooda, xaaladooda dhaqaale, ama luuqada ay ku hadlaan.